ပြင်သစ် စတား အမ်ဘာပေ ရဲ့ King of Paris စီမံကိန်းကြီး တကယ် အသက်ဝင်လာမှာလား — Sports Myanmar
ပြင်သစ် စတား အမ်ဘာပေ ရဲ့ King of Paris စီမံကိန်းကြီး တကယ် အသက်ဝင်လာမှာလား
ကိုင်လီယန် အမ်ဘာပေ ဟာ အသက် ၂၀ သာ ရှိပါ သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ဟာ အခြား သော ဘောလုံး သမားတွေ မက်မော တပ်မက် ခဲ့တဲ့ အရာ အတော်များများ ကို ရယူ ထားခဲ့ ပြီးပါပီ ။ သူ ဟာ ကမ္ဘာ့ ဖလား ချန်ပီယံ ဖြစ်သလို ပြင်သစ် ရဲ့ ချန်ပီယံ ခရီးလမ်းမှာ လည်း အဓိက ကစား သမား တစ်ဦး အဖြစ် နဲ့ ဂိုးတွေ သွင်းပေး ကာ ပါဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ကလပ် အသင်း သား ဘ၀ မှာ လည်း ပြင်သစ် ရဲ့ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဆု ကို ၃ နှစ် ဆက်တိုက် ရယူထား ခဲ့ ပါတယ် ။ PSG ကို ပြောင်းရွှေ့ လာအပြီး ကစား ပေးခဲ့ တဲ့ ၅၆ ပွဲမှာ လည်း ၄၆ ဂိုး အထိ သွင်းယူပေး ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူ ဟာ PSG ရဲ့ ဘုရင် မဖြစ်နိုင်သေး ပါဘူး ။ မြက်ခင်းပြင် ပေါ်မှာ စတား တစ်ဦး ဖြစ်နေ ပေမယ့် PSG ရဲ့ တန်ကြေး အမြင့်ဆုံး ကစား သမား ဘွဲ့ကို တော့ နေမာ က ရယူ ပိုင်ဆိုင် ထားဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ နေမာ ဟာ ဘာစီလိုနာ ကနေ PSG ကို ယူရို ၂၂၂ သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး စတား တစ်ဦး အဖြစ် ရပ်တည် နေဆဲဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘာပေ ဟာ သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ပိုမို ကောင်းမွန် တဲ့ စီမံကိန်း တွေ ကို မျှော်လင့် ထားပြီး PSG အသင်းထံ တောင်းဆိုမှု တွေ ပြုလုပ် ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဥရောပ ရဲ့ နာမည်ကျော် ဂျာနယ်လစ် Duncan Castle ရဲ့ ရေးသားဖော်ပြမှု အရ ဘာပေ ဟာ PSG ကို သူအလို ရှိတဲ့ ပုံစံ အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေး ဖို့ တောင်းဆို ထားပြီး ဖြည့်ဆည်း မပေးပါက အသင်း ပြောင်းမယ် လို့ သတိပေး ထားတယ် လို့ ပါရှိ လာခဲ့ ပါတယ်
“ဘာပေ က သူ ဟာ ကွင်းထဲ မှာ နေမာ ထက် ပိုပြီး အရေးပါ တဲ့ သူ ဖြစ်နေပြီ လို့ စပြီး ခံစား မိလာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အသင်း ရဲ့ အဓိက ကစား သမား တစ်ဦး အဖြစ် နဲ့ ကစားခွင့် ရဖို့ အတွက် နံပါတ် ၉ နေရာ ( အထောင် တိုက်စစ်မှုး ) ကို ပေးဖို့ တောင်းဆို ထားသလို ပင်နယ်တီ ကို လည်း ကန်ခွင့် ပေးဖို့ တောင်းဆို ထားပါတယ်”
“ဘာပေ ဟာ အထောင် တိုက်စစ်မှုး အဖြစ် နဲ့ ကစားမယ် ဆိုရင် အခုထက် ပိုပြီး ဂိုးတွေ ရမယ် လို့ ယုံကြည် နေ ပါတယ် ။ မနှစ် က တောင်ပံ မှာ တစ်ခါ တလေ ကစားခဲ့ ရလို့ ၊ ပင်နယ်တီ တွေ ပင်တိုင် မကန် ခဲ့ရလို့ ရွှေဖိနပ်ဆု နဲ့ လွဲခဲ့တာ လို့ သူ ယုံကြည် နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒါတွေ ကို ခွင့်ပြု ဖို့ သူ တောင်းဆို ထားတာပါ”
“နောက်ပြိးတော့ အသင်း ရဲ့ ကစားကွက် ကိုလည်း သူက ပြောင်းလဲ ချင် နေ ပါတယ် ။ လက်ရှိ နည်းပြ တူချယ် ဟာ ၄-၃-၃ ကို ဦးတည် ကစား နေ ပေမယ့် ဘာပေ ကတော့ မိုနာကို နဲ့ အတူ အမှတ်ပေး ဖလား ရခဲ့ တုန်းက ၄-၄-၂ ကစားကွက် ကို အထိုင်ချ ကစား စေချင် နေပါတယ် ။ ဒါက သူ့ အတွက် ပိုပြီး အစွမ်းပြ နိုင်မယ် လို့ လည်း ထင်နေပါတယ်” လို့ ဒန်ကန် ကတ်စတယ် က သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါး မှာ ထည့်သွင်းရေးသား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာပေ ရဲ့ တောင်းဆိုမှု တွေ ဟာ အသက် ၂၀ ဆိုတဲ့ အရွယ် အတွက် တော်တော်လေး ကို များတဲ့ တောင်းဆိုမှု တွေ လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူက တော့ ဒါတွေကို မလိုက်လျော ရင် အသင်း နဲ့ လမ်းခွဲဖို့ အထိ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယုံကြည်မှု အပြည့် အ၀ ရှိနေတာလား . . . . ဒါမှ မဟုတ် မြှောက်စားမှုတွေ ကြောင့် အခြေလွတ်သွားတာလား . . .
ဘာပေ ဟာ PSG ရဲ့ အထောင်တိုက်စစ်မှုး အဖြစ် ကစားမယ် ဆိုရင် ဂိုးတွေ အများကြီး သွင်းလာနိုင် မှာလား . . .
ပွငျသဈ စတား အမျဘာပေ ရဲ့ King of Paris စီမံကိနျးကွီး တကယျ အသကျဝငျလာမှာလား
ကိုငျလီယနျ အမျဘာပေ ဟာ အသကျ ၂၀ သာ ရှိပါ သေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူ ဟာ အခွား သော ဘောလုံး သမားတှေ မကျမော တပျမကျ ခဲ့တဲ့ အရာ အတျောမြားမြား ကို ရယူ ထားခဲ့ ပွီးပါပီ ။ သူ ဟာ ကမ်ဘာ့ ဖလား ခနျြပီယံ ဖွဈသလို ပွငျသဈ ရဲ့ ခနျြပီယံ ခရီးလမျးမှာ လညျး အဓိက ကစား သမား တဈဦး အဖွဈ နဲ့ ဂိုးတှေ သှငျးပေး ကာ ပါဝငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ကလပျ အသငျး သား ဘဝ မှာ လညျး ပွငျသဈ ရဲ့ အမှတျပေး ခနျြပီယံ ဆု ကို ၃ နှဈ ဆကျတိုကျ ရယူထား ခဲ့ ပါတယျ ။ PSG ကို ပွောငျးရှေ့ လာအပွီး ကစား ပေးခဲ့ တဲ့ ၅၆ ပှဲမှာ လညျး ၄၆ ဂိုး အထိ သှငျးယူပေး ထားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ သူ ဟာ PSG ရဲ့ ဘုရငျ မဖွဈနိုငျသေး ပါဘူး ။ မွကျခငျးပွငျ ပျေါမှာ စတား တဈဦး ဖွဈနေ ပမေယျ့ PSG ရဲ့ တနျကွေး အမွငျ့ဆုံး ကစား သမား ဘှဲ့ကို တော့ နမော က ရယူ ပိုငျဆိုငျ ထားဆဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ နမော ဟာ ဘာစီလိုနာ ကနေ PSG ကို ယူရို ၂၂၂ သနျး နဲ့ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့တာ ဖွဈပွီး အသငျးရဲ့ ပျေါပွူလာ အဖွဈဆုံး စတား တဈဦး အဖွဈ ရပျတညျ နဆေဲဖွဈ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဘာပေ ဟာ သူ့ရဲ့ အနာဂါတျ အတှကျ ပိုမို ကောငျးမှနျ တဲ့ စီမံကိနျး တှေ ကို မြှျောလငျ့ ထားပွီး PSG အသငျးထံ တောငျးဆိုမှု တှေ ပွုလုပျ ထားတယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။ ဥရောပ ရဲ့ နာမညျကြျော ဂြာနယျလဈ Duncan Castle ရဲ့ ရေးသားဖျောပွမှု အရ ဘာပေ ဟာ PSG ကို သူအလို ရှိတဲ့ ပုံစံ အတိုငျး လုပျဆောငျပေး ဖို့ တောငျးဆို ထားပွီး ဖွညျ့ဆညျး မပေးပါက အသငျး ပွောငျးမယျ လို့ သတိပေး ထားတယျ လို့ ပါရှိ လာခဲ့ ပါတယျ
“ဘာပေ က သူ ဟာ ကှငျးထဲ မှာ နမော ထကျ ပိုပွီး အရေးပါ တဲ့ သူ ဖွဈနပွေီ လို့ စပွီး ခံစား မိလာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ အသငျး ရဲ့ အဓိက ကစား သမား တဈဦး အဖွဈ နဲ့ ကစားခှငျ့ ရဖို့ အတှကျ နံပါတျ ၉ နရော ( အထောငျ တိုကျစဈမှုး ) ကို ပေးဖို့ တောငျးဆို ထားသလို ပငျနယျတီ ကို လညျး ကနျခှငျ့ ပေးဖို့ တောငျးဆို ထားပါတယျ”
“ဘာပေ ဟာ အထောငျ တိုကျစဈမှုး အဖွဈ နဲ့ ကစားမယျ ဆိုရငျ အခုထကျ ပိုပွီး ဂိုးတှေ ရမယျ လို့ ယုံကွညျ နေ ပါတယျ ။ မနှဈ က တောငျပံ မှာ တဈခါ တလေ ကစားခဲ့ ရလို့ ၊ ပငျနယျတီ တှေ ပငျတိုငျ မကနျ ခဲ့ရလို့ ရှဖေိနပျဆု နဲ့ လှဲခဲ့တာ လို့ သူ ယုံကွညျ နပေါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဒါတှေ ကို ခှငျ့ပွု ဖို့ သူ တောငျးဆို ထားတာပါ”
“နောကျပွိးတော့ အသငျး ရဲ့ ကစားကှကျ ကိုလညျး သူက ပွောငျးလဲ ခငျြ နေ ပါတယျ ။ လကျရှိ နညျးပွ တူခယျြ ဟာ ၄-၃-၃ ကို ဦးတညျ ကစား နေ ပမေယျ့ ဘာပေ ကတော့ မိုနာကို နဲ့ အတူ အမှတျပေး ဖလား ရခဲ့ တုနျးက ၄-၄-၂ ကစားကှကျ ကို အထိုငျခြ ကစား စခေငျြ နပေါတယျ ။ ဒါက သူ့ အတှကျ ပိုပွီး အစှမျးပွ နိုငျမယျ လို့ လညျး ထငျနပေါတယျ” လို့ ဒနျကနျ ကတျစတယျ က သူ့ရဲ့ ဆောငျးပါး မှာ ထညျ့သှငျးရေးသား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဘာပေ ရဲ့ တောငျးဆိုမှု တှေ ဟာ အသကျ ၂၀ ဆိုတဲ့ အရှယျ အတှကျ တျောတျောလေး ကို မြားတဲ့ တောငျးဆိုမှု တှေ လို့ ဆိုနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူက တော့ ဒါတှကေို မလိုကျလြော ရငျ အသငျး နဲ့ လမျးခှဲဖို့ အထိ ဆုံးဖွတျထားတယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
ယုံကွညျမှု အပွညျ့ အဝ ရှိနတောလား . . . . ဒါမှ မဟုတျ မွှောကျစားမှုတှေ ကွောငျ့ အခွလှေတျသှားတာလား . . .
ဘာပေ ဟာ PSG ရဲ့ အထောငျတိုကျစဈမှုး အဖွဈ ကစားမယျ ဆိုရငျ ဂိုးတှေ အမြားကွီး သှငျးလာနိုငျ မှာလား . . .